Dhageyso Shisheeyaha Oo Lagu Weeraray Duleedka Afgooye. – Calamada.com
Dhageyso Shisheeyaha Oo Lagu Weeraray Duleedka Afgooye.
Weerarkan dhabo galka ah ayaa kadhacay shalay galab duleedka degmada Afgooye gaar ahaan agagaarka deegaanka Cabdow Dibille, kadib markii halkaasi ay soo gaareen ciidamo lug ah oo qeyb ka ahaa kolonyo afrikaanta kamid ah oo mudooyinkan ku dhibaateysana inta udhexeysa deegaanka Ambareesa iyo degmada Afgooye.
Sarkaal katirsan ciidamada mujaahidiinta ayaa idaacada andalus usheegay in weerarka dhabo galka ah cadowga lagu gaarsiiyay qasaare dhimasho iyo dhaawac ah inkastoo aysan noo sheegin tirada halaagsantay.
Kolonyadan intii ay ku guda jireen sahay gaarsiinta walaalahooda duulaanka kujooga degmada Baraawe waxaa qabsaday weeraro badan iyadoo weeraradaasi looga gubay ilaa 8 kamid ah gaadiidkooda dagaalka iyo kuwa xamuulka qaada.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 14-07-1438Hijri.
Next: 64 Isugu Jirta Saraakiil Iyo Askar Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Afghanistan.